Kaarka Cas (Roose) oo sabab u noqday Geerida Garsoore Jose Valdemar – Gool FM
Kaarka Cas (Roose) oo sabab u noqday Geerida Garsoore Jose Valdemar
Byare December 31, 2017
(Mexico) 31 Dis 2017. Garsoore ayaa ku geeriyooday Isbital ku yaala dalka Mexico kaddib markii uu weeraray ciyaaryahan uu Kaarka cas u taagay intii lagu guda jiray kulan ciyaareed.
Jose Valdemar Hernandez Capetillo ayaa geeriyooday kaddib usbuuc uu ku jiray coma.
Waxaa loola cararay Isbital isagoo miir daboolan kaa oo ku yiilay Xalapa ee caasimada Bariga Mexico ee gobolka Veracruz 24-kii December kaddib markii uu wararar daran ku soo qaaday ciyaaryahan u safta koox xaafadeedka Guadalajara intii lagu guda jiray ciyaarta ka dhacday El Castillo stadium.
Garsooraha ayaa geeriyooday saacadihii hore ee shalay subax.
Warbixin uu soo saaray Madaxwaynaha Gosoorayaasha xirfadalaha ah ee Valentin Ramirez ayaa lagu yiri:
“Jose Valdemar Hernandez Capetillo, garsoore shaqeeya part-time ayaa geeriyooday saacadihii hore ee shalay subax kaddib dhaawac daran oo maskaxda ah uu la dhibtoonayay intii lagu guda jiray weerar xun uu ku soo qaaday ciyaaryahan ku sugan Pemex stadium ee ku yaala Xalapa, Veracruz.
“Talaabo ayaa la qaadi doonaa iminka si loo xaqiijiyo inay caddaaladu shaqeysay kaddib dhimashadii ku timid saaxiibkeen.
“Waa inaan ciribtirnaa dhacdooyinka ceynkan oo kale ah nabad ku harso Jose Valdemar Hernandez Capetillo.”
Ciyaaryahanka dilaaga ah ee loo aqoonsaday oo kaliya magaca Milton ayaa la aamisan yahay inuu gacanta ku jiro kaddib markii la xiray inkastoo aysan jirin war rasmi ah oo ku aadan halkii uu maanta ku sugnaa.
Arsenal oo guul gaari waysay xilli ay ku ciyaareysay Wada Gaduud markii ugu horreysay 40-sano kaddib...+SAWIRRO
Macalin soomaaliyeed oo leeliya xul qaran oo kamid ah kuwa waqooyiga Ameeriga oo Gool FM la hadlay,Wariye Baliil ayaa wareestay(DHEGAYSO)+SAWIRRO